Myanmar All Music Channel » Bobby Soxer Collection
HomeBobby Soxer Collection
52,791 Views စွာတေးလန် – Bobby Soxer @ MAMC.mp3
LCD – Hlwan Paing @ MAMC.mp3
တုန် – Hlwan Paing @ MAMC.mp3
စနေနေ့ – Hlwan Paing @ MAMC.mp3
တိတ်တခိုး – Bobby Soxer,Ye` Lay @ MAMC.mp3
စုံထောက် – Bobby Soxer @ MAMC.mp3
ဒီလိုမျိုးချစ်သူတွေ – Bobby Soxer, Hlwan Paing@ MAMC.mp3
ဆိုရင်းကမယ် – (Bobby Soxer,Hlwan Paing) @ MAMC.mp3
စိတ်ပြတ်နေတဲ့သူ – Bobby Soxer,Hlwan Paing @ MAMC.mp3
ဒုံးပျံ – Hlwan Paing @ MAMC.mp3
ဘိုကေ – Hlwan Paing @ MAMC.mp3
မဝေးဘူး – Hlwan Paing @ MAMC.mp3
မြန်မြန် ချစ်ရင်ချစ်တယ်ပြော – Bobby Soxer,Soe Phyoe @ MAMC.mp3
ကောင်မလေး – Hlwan Paing @ MAMC.mp3
အရိပ်ကလေးလို – Hlwan Paing @ MAMC.mp3
အာရုံ – Bobby Soxer,Eaint Chit @ MAMC.mp3
ယုံကြည်လိုက် – Bobby Soxer,Ni Ni Khin Zaw @ MAMC.mp3
Like Stranger – Bobby Soxer,Htein Win @ MAMC.mp3
ချွတ်တား (Bobby Soxer,G-tone) @ MAMC.mp3
Never Make Ya Lonely – Bobby Soxer,Zinmin @ MAMC.mp3
Someone-Tiny Twist @ MAMC.mp3
ခုန်လိုက်-Bobby Soxer,Hlwan Paing @ MAMC.mp3
Next generation-Bobby Soxer,G Tone @ MAMC.mp3
ရှာမှရှား-Sandi Myint Lwin,Bobby Soxer @ MAMC.mp3
Love Song-Bobby Soxer @ MAMC.mp3
Hold You Mind – Bobby Soxer,Ye` Yint @ MAMC.mp3
လောကဖြစ်စဉ် – Tiny Twist @ MAMC .mp3
တကောက်ကောက်လိုက်မယ် – Bobby Soxer,Thar Gyi @ MAMC.mp3
ဒွိဟ-Bobby Soxer @ MAMC.mp3
နာကျဉ်ခြင်းရလဒ်-Su Zi,Bobby Soxer @ MAMC.mp3
နှုတ်မဆက်ချင်ဘူး – Bobby Soxer,Hlwan Paing,Ye` Lay,Eaint Chit @ MAMC.mp3
ရင်ခုန်သံမပြောင်းလဲကြေး – Bobby Soxer,Soe Phyoe @ MAMC.mp3
ဘဝရဲ့သင်ခန်းစာ – Bobby Soxer,J Ki,Soe Phyoe @ MAMC.mp3
နှလုံးသားနားခိုရာ – Freddy , Bobby Soxer , သဲချစ်ကို @ MAMC.mp3
Telephone – Rဇာနည် , Bobby Soxer @ MAMC.mp3
ဘယ်သူ့ကိုခေါ်မှာလဲ – ရဲလေး ၊ ထက်ထက် (Bobby Soxer) @ MAMC.mp3
မင်းသဘော – Bobby Soxer @ MAMC.mp3
168.8Mb (37 files)
Related Page : Bobby Soxer Gallery Bobby Soxer Collection Part-1 [1-20 ](Mediafire )
Bobby Soxer Collection Part-1 [21-37 ](Mediafire )
Bobby Soxer Collection Part-1[1-20 ] Dropbox Downwload Link
Bobby Soxer CollectionPart-2[21-37 ] Dropbox Downwload Link
Collect From MHC,MMA,MyanmarSongs.Net
MG KYAW GYI
TOUN TINE PAY YA AUNG MINN KA THA TOUN SAR LAR.THA TOUN SAR SO NGAR PAY MAL.
ဒွိဟ သီချင်းကိုပိုကြိုက်ပါတယ် အသံအရမ်းကေင်းတယ်နော် ကိုလွှမ်းပိုင်နဲ့တွဲဆိုတာအရမ်းလိုက်ပါတယ် နောက်ထပ်လည်းအောင်မြင်ပါစေ
I can’t download with iphone…Show me how to do it.
ူသူငယ်ချင်းသီချင်းတွေကို အများဆုံးကြိုက်ပါတယ် ။
http://www.facebook.com/chitya.lay Aungye Lay
အကုန်ကောင်းတယ် အရမ်းလည်းကြိုက်ပါတယ် Bobby Soxer ရဲ့ သီချင်းတွေကို
သီချင်းကို ဖုန်း ကနေdownload လုပ် တာ မရ ဘူးfail ဖြစ်ဖြစ် နေ ပါ တယ် အဲ့ဒါ ဖုန်းကဖြစ် တာ လားဒီကဖြစ် တာ လား။တစ်ချက် လောက် ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။
ဖုန်းက ဒေါင်းလော့ လုပ်တယ်ဟာနဲ့ ဒေါင်းလော့ ရင်တော့ ရပါတယ် ဒီက အစ်မ ဘာနဲ့ ဒေါင်းတာလဲတော့မသိဘူး တကယ့်တော့ ဖုန်းနဲ့ ဒေါင်းလော့ရပါတယ် မရရင်လဲ Music Download လုပ်တယ် Software တွေ ဖုန်းမှာ သုံးလိုက်ရင်ဒေါင်းလော့ရတာ လွယ်ပါတယ် ..။
လွှမ်းပိုင်က မဖြစ်နိုင်ဘူး သီချင်းဆိုတော့ ထက်ထက် ကဘာသီချင်းမှပြန်တုန့်ပြန်ပြီးမဆိုဘူးလား
I can’t see myanmar font in the song file name.
How can I do to see Myanmar font.
All like Xo Xo like ^_~
့hnin ei phyu
သီချင်ကောင်သလို အမကလဲချောတယ် ဘယ်တောမလက်မထက်ပါနဲ
Ever like U music
သူလည်း ယောကျာ်း လိုခြင်းမှာပေါ့ဟဲ
အစ်မ အရမ်းချော တယ် ကျွန်တော်အရမ်း ကြိုက်တယ် အစ်မ သီချင်းတွေကို
အမသီချင်းတွေအားလုံးကောင်းတယ် နော် အမြဲအားပေးနေပါမယ်ီDr.dre
Leave အစ်မ အရမ်းချောတယ် အစ်မ သီချင်းတွေကို
ကိုလွမ်းပိုင် နဲ့လည်း လိုက်တယ်
YOUR SONGS ARE NICE BUT YOU ARE NOT BEAUTIFUL AS MY DOTA HERO.I ADVISED YOU NOT TO SING WITH FROG(HLWAN PAING).
ထက်ထက်သီချင်းတွေနာထောင်ရတာအရမ်းကောင်းပါတယ် အမြဲအားပေးနေပါတယ် အကောင့်လေးပြောပြပေးပါလား မထက်ထက် အသစ်ထွက်လာမယ့်သီချင်းတွေကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်
bobby soxer music ko kyite tal
ama music tway all kg par tal dwe ha music po kyite tal
loverpunk53@gmail.com par phoophoo
acc ka add lo ma ya pu htet2 lay ayan chit tal
fb mar twae chin lo pyi tk khin chin lo par 2youk lone ayan like tar pal
fb acc pay lay
aung khing oo.kme
ထက်ထက်ရေ မင်းသီချင်းတွေကို ငါအရမ်းကြိုက်ပါတယ်နော် ဒါပေမဲ့ လူကိုပိုကြိုက်တယ်သိလား။
Part – 1 က Link မှားနေတယ်ထင်တယ်။ Idiots collection ရဲ့ Download Link ဖြစ်နေတယ်။
I like love Htet Htet”s Song
ကျွန်တော်အကောက့်ရော အပ်ပေးနော် davidaung1500
music all ko kyite par tal
မထက်ထက် သီချင်းဆိုတာတွေက အရမ်းလန်းတယ်ဗျာ style က မိုက်တယ် ကြိုက်တယ် အားပေးနေလျှက်ပါ
သီချင်းတွေ ဒေါင်းလို့ရ၀ူး အမ ထက်ထက်